Sicir -dhimis weyn oo loogu talagalay keyboard -ka Farshaxanka ee Logitech | Waxaan ka imid mac
Farshaxanka Logitech Waa kiiboodhka bilaa -waayirka ah oo siiya dadka isticmaala waayo -aragnimo aad u fiican runtii, oo leh koontarool wareeg ah oo la jaanqaadaya hawlaha aan si joogto ah u qabanno oo si weyn u oggolaanaya wax -soo -saar weyn.
Ku iibso kiiboodhkaaga Farshaxanka Logitech qiimo dhimis halkan
Soydemac waxaan ku raaxaysanay in aan gorfaynno keyboard -kaan waqti ka hor maantana waa mid ka mid ah furayaasha aan sii wadno inaan kula talinno dhammaan isticmaaleyaasha u baahan keyboard kii ujeedo badan lahaa oo leh bilic iyo naqshad cajiib ah oo ka sarraysa runtii wax qabad leh.
Farshaxanka Logitech, oo aad uga badan kiiboodhka
Ku xakamee garaaca orodka iyo nalka dambe ee caqliga badan
Wicitaanka xulashada hal -abuurka ah wuxuu la jaan qaadayaa arjiga aad isticmaaleyso sidaa darteed isku -duubnaanta ay bixiso runtii waa mid gaar ah. Xakamaynta taabashada-taabashadu waxay kuu oggolaanaysaa inaad dareento horumarkaaga abuurista, si aad u hesho hawl socod aad u hufan oo wax-ku-ool ah.
Qodobka kale ee xiisaha leh ee kiiboodhkan waa iftiiminta caqliga leh ee furayaasha. Iftiinka muhiimka ah ee Farshaxanku wuxuu bilaabmaa isla marka aad gacmahaaga isugu soo dhawaato. Iftiiminta furayaasha gadaal si otomaatig ah ayaa loo hagaajiyaa iyadoo loo eegayo xaaladaha iftiinka jira waxaana dhihi karnaa waan jecelnahay.
Hadda tan Kiiboodhka Logitech ee cajiibka ah ayaa hoos loogu dhigay ku dhawaad ​​50 euro ka sarraysa qiimaheedii caadiga ahaa markaa waxaan wajahaynaa waqti wanaagsan oo wax lagu iibsado. Runtii dhammaan kuwa haysta ama ku tijaabiyey Mac -kooda waxay ku darayaan inay tahay mid ka mid ah furayaasha ugu fiican dhowr sababood, ma aha inay raqiis tahay laakiin sida ay ku sheegaan kiisaskaan tayada ay na siiso labadaba xagga naqshadeynta iyo shaqooyinku waxay mudan yihiin mid kasta oo ka mid ah lacagta yurub ee aan ku baxay.
Halkan waxaad ka iibsan kartaa kiiboodhkaaga Logitech Craft qiimo dhimis
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Sicir -dhimis weyn oo loogu talagalay keyboard -ka Farshaxanka ee Logitech ee cajiibka ah
Qaar ka mid ah wararka dillaacay oo loo xaqiijin karo 14-inji iyo 16-inji MacBook Pros